3F ma yahay soo -saare dhab ah?
Haa, 3F waa warshad xirfadeed ee silig, fiilo iyo alaabta maaraynta siligga ilaa 1993.
Waa maxay suuqyada ay 3F taageerto?
3F waxay taageertaa baahida silsiladda sahayda ee OEM-yaasha iyo Ku-xigeennada adduunka oo dhan suuqyada soo socda ；
• Aerospace & Difaaca
• Gawaarida & markabka
• Qalabka korontada
• Dhulka Kombiyuutarka
• Guriga Casriga ah
• Transformer & kabadhka xakamaynta
Miyuu 3F u raraa si caalami ah?
Haa, 3F waxay siisaa xalka silig, xadhig iyo silig maareyn kumanaan shirkado adduunka oo dhan ah, oo leh bakhaar iyo xafiis ku yaal USA, Thailand iyo HK, sidoo kale waxay gaarsiin kartaa meel kasta oo ka timaada warshadda madaxa Shiinaha.
3F ISO ma shahaado baa?
Haa, 3F waxay heshaa shahaadada ISO tan iyo 2001, had iyo jeer waxaan ilaalinaa tayada marka hore horumarka. isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale haysannaa shahaadada nidaamka xakamaynta tayada ee QC080000 iyo IATF16949.
3F UL/ CSA ma shahaado baa?
Haa, dhammaan badeecadaha 3F waxay leeyihiin shahaado, kaliya maahan UL/ CSA laakiin sidoo kale VDE iyo JET waxay ku habboon yihiin suuqyada iyo macaamiisha kala duwan.
3F ma siisaa alaabada ROHS/ REACH?
Haa, 3F waxay xambaarsan tahay ROHS/ REACH silig iyo waxyaabaha fiilooyinka waafaqsan markasta oo la heli karo.
3F noocee ah ayaa alaab ah?
3F waxay soo bandhigaysaa xulashada silig, fiilo iyo xalka maaraynta siligga oo ay ka mid yihiin:
• Silig & xadhig
• UL & CSA & VDE & JET Wire Wire
• Siligga Baabuurta
• Fiilada Wire & Doon
• Mil-Spec & Aerospace
• Siligga elektarooniga ah
• Takhasus & silig caadadiisu tahay ama suunka xarigga
• silig kululaynta
• Xargaha xargaha nylon
• Tuubada yaraynta kulaylka
• Tuubbada PVC
• Tuubo Fiberglass ah
• Tuubbada silikoon
• Tuubada qashinka
• Tuubada nylon
3F ma bixisaa silig naxaas ah iyo fiilo?
Haa, 3F dhammaan xarigga xargaha iyo fiilada waa naxaas qaawan, naxaas daasadda ah, naxaas dahabka ah oo dahabka ah ama naxaas dahaarka leh ee Nikel.
3F miyuu habeeyaa adeegga suunka xadhigga?
Haa, 3F waxay leedahay waaxda suunka xadhigga sanado badan, pls waxay u dirtaa sawirro naqshad ama shaybaarro si loo hubiyo qiimaha.
Suuragal ma tahay inaad booqato warshadda 3F oo aad soo saarto khad ka hor intaadan dalban?
Haa, ku soo dhawow inaad na soo booqato wakhti kasta, haddii aadan waqti haysan, sidoo kale waxay nala qabanqaabin kartaa wicitaan fiidiyaha si aad u hubiso.
Sideen u dalban karaa 3F?
U dir codsigaaga dalabka emayl ahaan Jackie@qifurui.com ama na soo wac +86-18824232105 inta u dhaxaysa 7:30 AM-23PM (waqtiga Shiinaha).
Suurtagal ma tahay inaad internetka ka dalbato?
Haa, pls u dir su'aalo websitka alibaba www.qifurui.en.alibaba.com , waxaan kuu samayn karnaa amarka hubinta ganacsiga.
Ma jiraa ugu yaraan dalab?
Haa, 3F waxay leedahay silig badan iyo cabbir cayn kasta ah had iyo jeer, pls noo xaqiiji nooca siligga iyo cabbirka & midabka aad u baahan tahay, waxaan kuu hubin doonnaa kaydka sida ugu dhakhsaha badan.
Suuragal ma tahay in la helo shaybaarro bilaash ah ka hor dalabka?
Haa, Ku soo dhawow inaad weydiisato shaybaarro bilaash ah. Waxaan bixin karnaa wax ka yar 50m shaybaarro bilaash ah haddii ay hayaan, haddii loo baahdo in la soo saaro shaybaar, markaa waxaan u baahannahay inaan bixinno qaar ka mid ah qiimaha shaqaalaha, waxaanna u jari doonnaa qiimahan mustaqbalka dambe. shaybaarka samaynta kharashkaaga sidoo kale. U -dirid bilaash ah cinwaanka Shiinaha.